संसारमा १० सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपत्यकाहरू यात्रा समाचार
मोनिका सान्चेज | | पर्यटन गन्तव्यहरू, सामान्य, मार्गदर्शकहरू
मलाई उपत्यका मन पर्छ। तिनीहरू एक प्रामाणिक प्राकृतिक तस्बिर हुन् जहाँ तपाईं वातावरणसँग पूर्ण सामञ्जस्य हुन सक्नुहुन्छ: ठाउँको आवाज सुन्न, सफा र शुद्ध हावा सास लिनु, र तपाईंको क्यामेराको साथ तपाईं सबै विशेष कुनाहरू क्याप्चर गर्नुहुन्छ, ती जो तपाइँ भावनाहरु को कम्पन बनाउँछ।
त्यहाँ धेरै र दुर्भाग्यवश हामीसँग ती सबैलाई भेट्न एकै मात्र जीवन छ, म तपाईंलाई बताउन जाँदैछु जुन विश्वमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण उपत्यकाहरू हुन्.
1 Incles घाटी
2 लोइर उपत्यका
3 Porsmork घाटी
4 ग्रेट रिफ्ट उपत्यका
5 राजाको उपत्यका
6 स्मारक घाटी
7 योसेमाइट उपत्यका
8 मृत्यु उपत्यका
9 Waipi'o उपत्यका
10 डानम उपत्यका
हामी हाम्रो यात्रा सबैभन्दा नजिकको, अन्डोरामा भ्रमण गरेर सुरु गर्नेछौं। Incles घाटी, यो जस्तो लाग्न सक्छ विपरित, आफ्नो पहाड चढ्न वा पानीमा नुहाउन चाहने जो कोहीलाई स्वागत गर्दछ। त्यहाँ पहुँच गर्न यो राम्रो शारीरिक तयारी गर्न आवश्यक छैन, त्यसैले यो एक उत्कृष्ट ठाउँ बच्चाहरु को लागी जो एक marmot वा chamois पाउन को लागी हो।
फ्रान्स मा अवस्थित, यो नदी पछि सबै क्षेत्र को नदी नुहाउने नाम छ: लोयर। तिनीहरू आशिषित भूमिहरू हुन् किनभने यो मद्य उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो। विश्वको यस भागमा तपाईं फ्रान्सेली महलहरूको समूह देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै सेन्ट-ब्रिसन वा क्लस-लुसे, ती सबै फ्रेन्च पुनर्जागरणको समयमा बनेका थिए।
यदि तपाईं भ्रमणको र गीजरमा नुहाउन सक्षम भएको सपना देख्नुहुन्छ भने ... त्यसो भए तपाईं आइसल्याण्डको पोर्शमोर्क उपत्यकालाई हराउन सक्नुहुन्न। अवश्य पनि होशियार हुनुहोस् किनकि यसको चट्टानी माटो छ। तर परिदृश्य दर्शनीय छ, त्यसैले यो धेरै यसको लायक छ।
ग्रेट रिफ्ट उपत्यका
अफ्रिकामा हामी ग्रेट रिफ्ट घाटी भेट्टाउँछौं, जसको विस्तार 4830 XNUMX० किलोमिटर छ। यसले विभिन्न देशहरूको क्षेत्रहरू जिबूतीदेखि मोजाम्बिकमा हस्तान्तरण गर्दछ। यो ठाउँ हो जहाँ तपाईं जान सक्नुहुन्छ पाँच ठूला अफ्रिकी जनावरहरू हेर्नुहोस्: सिंह, चितुवा, हात्ती, गैंडा र भैंसे। र यो मात्र होईन, तर यो हाम्रा पुर्खाहरूको वासस्थान पनि थियो। वास्तवमा यहाँ पहिलो होमिनिन जीवाश्महरू भेटिए।
हामी अफ्रिकामा जारी छौं, यस पटक राजाको उपत्यकामा। यो वास्तवमै नेक्रोपोलिस हो जुन लक्सरको छेउमा बस्दछ। यहाँ १ the औं, १ th र २० औं राजवंशका फिरऊनहरूले एक पटक आराम गरे। यसै ठाउँमा होवार्ड कार्टरले १ 1922 २२ मा टुटनखामुनको चिहान पत्ता लगाए र केही दशक पछि १ 1979। In मा यसलाई विश्व सम्पदा घोषित गरियो।
अब हामी विमान लिएर युटाको दक्षिणी सीमानामा एरिजोनाको साथ संयुक्त राज्य अमेरिकामा जान्छौं। यस ठाउँमा, यो बोटबिरुवाहरू होइन जुन नायकहरू हुन्, न त जनावरहरू नै हुन्, तर प्रकृतिको उत्कृष्ट कृतिहरू। हावाले डिजाइन गरेका केही ढु stone्गाका मूर्तिहरू, जुन करोडौं वर्ष पहिले उड्न थाल्यो र आज पनि उनीहरूको काम परिमार्जन गर्न जारी छ। पक्कै पनि जब तपाईं जानुहुन्छ, तपाईंले यसलाई पश्चिमी चलचित्रमा हेरेकोबाट धेरै परिचित पाउनुहुनेछ।
यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेट्टाउने सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक हो। योसेमाइट उपत्यका क्यालिफोर्नियाको हिमनदी उपत्यका हो ज surrounded्गल र पहाडहरूले घेरिएको, जसको हिसाबले हरेक जाडोमा सेतोमा कभर गरिन्छ। यसलाई १ 1984 since XNUMX देखि विश्व विरासत साइट पनि मानिन्छ, किनकि यदि क्यालिफोर्नियाको सडकहरू हिंडेर तपाईं केही शान्त चाहनुहुन्छ भने ... मलाई पक्का छ कि तपाइँको जडान विच्छेद गर्न कठिन हुनेछैन यो शानदार ठाउँमा।
हामी क्यालिफोर्नियामा जारी राख्छौं, करीव २२ 225 किलोमिटर लामो र to देखि २ kilometers किलोमिटर चौंडाको उपत्यकामा। यो जो तापमान राम्ररी सहन गर्दैन उनीहरूका लागि उपयुक्त छैन, किनभने पारा सजीलो ºº डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढी हुन सक्दछ। वास्तवमा, गत शताब्दीको अवधिमा º 8.º डिग्री सेन्टिग्रेडको अप्रिय तापमान दर्ता गरिएको थियो, विशेष गरी जुलाई १०, १ 24 १45 मा। त्यसैले यदि तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, पानी, सनस्क्रीन र टोपी ल्याउन नबिर्सनुहोस्।
तर यदि तपाईं न्यानो मौसम संग कुनामा जान चाहानुहुन्छ, त्यसो भए हवाईतर्फ लागौं। वाइपीओ उपत्यका (कहिलेकाँही यसले वाइपिओ पनि हिज्जे गर्दछ) हामाकुवा जिल्लामा द्वीपसमूहको ठूलो टापुमा अवस्थित छ। सामान्यतया उष्णकटिबंधीय प्रकृति द्वारा ढाकिएको र क्रिस्टल स्पष्ट पानीले नुहाइन्छ कि पौंडी खेल्न आमन्त्रित गर्नुहोस्। तर छाता नबिर्सनुहोस्, किनकि यस क्षेत्रमा वर्षा धेरै हुने गर्दछ।
यदि तपाइँ प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ र तपाइँले वन देख्न चाहानुहुन्छ जहाँ मानिसहरूले धेरै छाप छोडेका छैनन्, यो बोर्निओतिर जाने समय हो, जहाँ हामी हाम्रो यात्रा समाप्त गर्नेछौं। यो प्रभावशाली उपत्यका लाहड दातुको w 83 किमी दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। Forest440० किलोमिटर प्रत्यक्ष क्षेत्र क्षेत्र कभर गर्ने वन आरक्षणमा २ birds० भन्दा बढी बिभिन्न प्रजाति चराहरू, सुन्दर क्लाउड पेंथरहरू, मक्काक र अरंगुटन्स, अन्य धेरै जनावरहरू बीच, तपाई प्रकृतिसँग सम्पर्कमा हुन सक्नुहुन्छ जस्तो कि पहिले कहिल्यै थिएन।
तपाईलाई टुर मन पर्यो?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » संसारमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण उपत्यका के हुन्?
धन्यबाद, राम्रो जानकारी, यहाँ सम्म कि यसलाई अधिक पूरक को लागी महान हुन सक्छ 😀
Julieth लाई जवाफ दिनुहोस्
Tucáán प्रान्तमा, अर्जेन्टिनाको उपत्यकाबाट टाफालाई सम्झन्छु। यो विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो उपत्यका हो, यदि तिनीहरूले उपत्यकाको बीचमा रहेको पेलोलाई बाहिर निकाले भने यो सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। यो प्रान्तमा एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण हो!
धन्यवाद राम्रो जानकारी
हामीलाई थोरै पत्ता लगाउन मद्दत गर्नुभएकोमा धन्यवाद
रातोलाई जवाफ दिनुहोस्
Aranjuez को शाही साइट र यसको सुन्दर बगैंचा
यात्री वर्णमाला (II)